Trano - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Fanavaozana ny serivisy
Inona no mitranga ao amin'ny ...
Torolàlanao amin'ny fampiasanao ny Recycle Bin.
Torolàlanao amin'ny fampiasanao ny Garden Vegetation Bin.
Torolàlanao amin'ny fampiasanao ny General Fako
1 morontsiraka. 1 tontolo. Serivisy fanodinana fako sy fanodinana
Eto ianao dia afaka mahita izay rehetra ilainao ho fantatra momba ny serivisy fitantanana ny fako sy fanodinkodinana ho an'ny mponina ao amin'ny morontsiraka Afovoany NSW. Mamporisika anao izahay hikaroka, hifanerasera, hahita ary hianatra. Betsaka ihany koa ny fampahalalana ho an'ny ankizy sy ny mpianatra amin'ny sokajin-taona rehetra. Mba hanombohana dia tsindrio ny tabilao serivisy tianao ho fantatra bebe kokoa na ampiasao ny fikarohana eo an-tampon'ny pejy.